Xiisadda Baladwayne ee dilka sarkaal katirsanaa ciidamada (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 13, 2019 12:02 g 0
Xiisad ayaa wali kajirta magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka dhalatay kadib dil loo gaystay Col. Maxamed Macow oo ahaa taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan, xilli uu socday dibadbaxyo looga soo horjeeday eedaymo lagu soo oogay guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed.
Guddoomiye kuxigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga Baladwayne Xasan Ibraahin Cabudule ayaa warbaahinta Daljir u sheegay in aan wali la’aasin sarkaalka la dilay, waxaana uu sheegay inay wadaan baaritaan oo guddi gaar ah loo xilsaaray.
Dibaxbaxyo ka dhan ah madaxwaynaha Hirshabelle ayaa maanta kadhacay Baladwayne.
Hoos kadhegayso waraysiga oo ay la yeelatay Hodan Sulub Diini, Xasan Ibraahin Cabudule oo ah kuxigeenka amniga iyo siyaasadda Baladwayne.
Ciidamada DANAB ee Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay Jubada Hoose